“Runtaa lagu badbaadaa” qiso cajiib ah WQ-qoraa ibraahim dhuxul. | Haqabtire News
“Runtaa lagu badbaadaa” qiso cajiib ah WQ-qoraa ibraahim dhuxul.
maalin maalmaha ka mid ah, ninkii la odhan jiray “xajaaj binu yuusuf as-saqafi” oo ahaa mid ka mid ah hogaamiye yaashii islaam ahaa ee mar soo qabtay hoogaanka umada islaamka ah. ayaa maalin isagoo qudbad ujeedinaaya dadka muslimiinta ah, taaso ay ahaydna maalin jimce ah ayaa waxa uu ku dheeraaday jeedinta qudbadii salaada jimce. Intaa kadib ayaa waxa la hadlay ninka mid ah dadkii salaad misaajidka u yimi kaas oo runta u sheegay kana codsaday inuu salaada tujiyo si aanay u dhaafin wakhtiga salaadu. Kadib ninkii xajaaj ahaa waxa uu amray in la qabto ninkan ka horyimi waaxaana la xidhay ninkii wax u sheegay Hogaamiyihii xajaaj.
Markii ninkii uu muddo xidhnaa ayaa waxa malintii danbe ninkii jaxaaj ahaa u soo ergo tegay ninkii uu xidhay odayaashiisii.
waxa ayna ka cod sadeen in uu xoriyadiisii u soo celiye iyaga oo qiil uga dhigaaya ninkan xidhan inuu yahay nin maskaxda ka jiran. Arinkaas xaaj waa uu ka aqbalay balse waxa uu shuruud uga dhigay inuu ninkani qirto inuu waalan yahay isagu si markaa uu u helo xoriyadiisii ama se uu u sii daayo. Kadib ayaa waxaa la soo saaray ninkii waxaana loo horkeenay xajaaj si uu uqirto inuu maskaxda ka buko taas oo ay odayaashiisu u cadeeyeen markii hore xajaaj. balse isagu waa uu diiday inuu qirto inuu waalan yahay, taas oo ay markii hore ku andacoonayeen ergadii isaga u doodaysay. ninkii waxa uu ganafka ku dhuftay arinkaa ay sheegeen ergadii isaga u dacwoonaysay, isagoo sheegay in aanu marnaba iska qaadaynin nimcada uu eebe ku galaday.
kadib odoyadii u ergaynayay aad ayay u naxeen, waxaa hadlay xajaaj binu yuusuf oo yidhi “waar iska siidaaya isaga ayaa idinka saxane” Waxaana loo soo celiyay xoriyadiisii. Waxa ay sheekadani ku tusinayaa in runta lagu badbaado ifka iyo aakhiraba. Run sheeg rabbi ayaa kugu badbaadine
W/Q – qoraa ibraahim dhuxul dribraahimm@gmail.com
Rabbi ayaa mahad iska leh Markasta iyo meelkastaba.